Eden Lodge Madagascar: manao onja any amin'ny nosy amoron-tsiraka
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Eden Lodge Madagascar: manao onja any amin'ny nosy amoron-tsiraka
Vao haingana i Green Globe no nanamafy ny fahazoana mari-pankasitrahana an'i Eden Lodge any Madagascar, mitovy amin'ny fitambarana fampandrosoana lafo vidy sy maharitra.
Green Globe dia nanamafy indray ny Eden Lodge nahazo loka. Mitovy hevitra amin'ny fampifangaroana ny fampandrosoana lafo vidy sy maharitra, i Eden Lodge dia mpikambana ao amin'ny vondrona hotely Ecoluxury, safidin'ny trano fandraisam-bahiny tsara indrindra eto an-tany. Eden Lodge no fananan'ny Green Globe voalohany nohamarinina teto Madagasikara ary izy no trano fandraisam-bahiny voalohany misy herin'ny masoandro eran'izao tontolo izao.
Fantatra amin'ny ezaka maharitra nataony i Eden Lodge ary nandritra ny taona lasa dia nifantoka tamin'ny tetik'asa izay manaja ny tontolo iainana hatrany ny fananana. Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Ademe (Agence de l'Environnent et de la Maîtrise de l'Energie), dia manohy mampivoatra ny fizahantany ara-tontolo iainana ao amin'ny nosy. Nandritra ny fifanarahana niaraka tamin'i Ademe, ny Lodge dia nanambola 150,000 Euros tamin'ny fametrahana mpamokatra fotovoltaika mpamokatra masoandro (10kWc.) Miaraka amin'ny panneaux solaires 44 sy ireo fitaovana teknolojia avo lenta. Ny fitaovana elektrika rehetra sy ny jiro LED ao amin'ny trano dia voafidy noho ny fampiasana angovo ambany.
Ny fepetra fitsinjovana rano sy ny fitantanana an'io loharano sarobidy io dia nodinihina sy nomanina tsara. Satria manana masoandro 300 andro isan-taona ny nosy Madagascar, dia misy rano mafana mandavantaona. Eden Lodge dia mizaka tena amin'ny rano mafana vokatry ny fanaparitahana ireo sensor mafana (CESI). Ankoatr'izay, misy lavadrano efatra miorina eo an-toerana manome rano madio ho an'ny trano manontolo.
Ny Lodge mihitsy dia trano eco-friendly izay namboarina mifanaraka amin'ny fomba fanao tsara indrindra. Vato vazimba, ala tsy sarobidy ary tafo ravinala (vita amin'ny bozaka) no nampidirina tamin'ny fananganana voalohany ny trano. Ny mpanorina sy ny mpanao asa tanana rehetra dia nokaramaina avy ao anatin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana.
Mifanaraka amin'ny politikan'ny tontolo iainana an'i Eden Lodge ary ao anatin'ny paikadiny momba ny fitantanana ny fako, dia ampiasaina indray ny vy ary avadika ho lapoaly ary kojakoja hafa ao an-trano, voafetra ny fanjifana plastika ary ny fako fitaratra dia entina any Nosy Be hanaovana fanodinana.
Mikasa ny fitsangatsanganana an-dàlam-pandehan'ny Andron'ny Asa any NYC
Ireo mpandeha fiaramanidina sembana dia nianjera tamin'ny escalator: tompon'andraikitra amin'ny Alaska Airlines ve izany?